Nezvedu - Hebei Yifan Wood Industry Co., Ltd.
Hebei Yifan Wood Indasitiri
Iri muQuyangqiao, Zhengding County, inovhara nharaunda yemamirimita mazana matanhatu nemazana matanhatu. Tisati tatanga bhizinesi redu repasi rese, Kubudirira kukuru kwakaitwa mumunda weKutengesa muChina.
Iyo fekitori ine yekucheka yekumucheto michina yekugadzira, emagetsi ekucheka masaha, otomatiki mativi-mativi ekuboora, otomatiki emucheto mabhendi michina inotengwa kubva kuGerman nemamwe makuru-madiki michina Isu tinotevedzera mutemo wenyika wekuchengetedza zvakatipoteredza uye tine tsvina tsvina maitirwo. MunaAugust 2019, nzvimbo yefekitori yakawedzerwa, uye iyo michina yakagadziriswazve.
Nhoroondo yefekitori inogona kuteverwa kumashure kusvika 1985. Muvambi akanyatsoteedzera kukwidziridzwa kwekuvandudza kwenyika uye akatanga bhizinesi nekubatanidza kugadzirwa nekutengesa. Yakava hombe-pamwero wekugadzira bhizinesi muChina.
Isu tinotanga kuwedzera timu yekumahombekombe mu2016, uye ikozvino ine yakakura yekugadzira uye yekutengesa timu.
Zvinhu zvedu zvinotengesa pasirese (USA, UK, Czech Republic, Poland, Israel ...) Kuzvitoro zvedu unogona kutarisa mumhando dzakasiyana siyana, kubva pamazuva ano kusvika kurusenzi nezvose zviri pakati. Mitengo muzvitoro zvedu ndeyechipiri kune hapana, saka unogona kuva nechokwadi chekuti uchawana zvinhu zvishoma.
Basa redu ndere kuita kuti vatengi vedu vanzwe senge superstars dzavari. Kubva pane izvo zvigadzirwa zvatinogadzira kune yedu vatengi, isu tinoona kuti zvese zvatinoburitsa zviri zvepamusoro-notch mhando uye kuti munhu wese anobatwa nerudo uye nehanya. Isu tinoedza kuratidza muenzaniso wekurega runako rwako ruchipenya uye kupenya kubva mukati.
Isu tinoziva kuti dzimwe nguva hatina izvo zvauri kutsvaga pazviri kuratidzwa, asi kana iwe ukatipa mukana wekukuratidza akasiyana siyana emabhuku kubva kune vatengesi vedu tinogona kuzowana iyo fenicha yakakwana iwe yauri kutsvaga. Ndokumbira utende kuti isu tinogona kukupa iwe yakanakisa yekutenga ruzivo.